Phila VIP Blackjack |	Phila VIP Blackjack |
Phila VIP Blackjack
Blackjack umdlalo yekhasino ukuthi engcono sijatshulelwe ngesikhathi itafula a professional nomthengisi uyakulekelela. Lokho isizathu abantu ngivakashela kude eseholidini ukujabulela lo mdlalo. Sibonga u Phila VIP Blackjack ukuthi yisihumusho inthanethi kodwa umdayisi bangempela ukunikela real-time nosizo. Lokhu ifoni blackjack ibhonasi khulula Umdlalo iza kwencazelo high 3D ukuhlela real umdlalo etafuleni kanye namakhadi yangempela. Kukhona amaningi eliphezulu amakhamera akunikeza nombono ongokoqobo ngokulinganiselwa umdlalo kusuka engeli abukeka. Lo mdlalo kufanelekile VIP abadlali ukugembula ngemadlana ephakeme. Imikhawulo aphakathi kuka £ 1 futhi £ 5000 eyenza ekahle umdlalo zonke izinhlobo abadlali.
Mayelana unjiniyela Phila VIP Blackjack
Le nguqulo bukhoma ifoni blackjack ibhonasi khulula umdlalo yasungulwa ngu NetEnt, iphayona inthanethi yekhasino amageyimu. Sinenkosi engamashumi amabili nakho okucebisayo ukudala izinhlobo eziningi ezahlukahlukene imidlalo ukuze ivumelane zonke izinhlobo izilaleli.
Imithetho yaleli ifoni blackjack ibhonasi khulula ilula kakhulu futhi esifana nesika ezweni ezisekelwe yekhasino version. Ukunqoba isandla kumelwe beat isandla umthengisi sika by beshaya eduze 21 amaphuzu kuka umthengisi. A umthengisi enhle uzobe akusiza e ngokubheja ngemali yakho futhi liyoshiswa yazise isikhathi ngasinye ukuze ungakhohlwa. Uyoze ume zonke 17s, Nokho, une upper andla lapha kusukela ongazifunda amakhadi okwengeziwe ngale 17. Uma weqa 21 ke uzolahlekelwa isandla ngokufanayo esimweni umthengisi kakhulu. Isikrini game futhi ubonisa uxhaxha izibalo ezingakusiza amacebo sakho kangcono.
ukubheja Ukukhokhela: Uma ufaka win ngesandla ngqo nge eshaya isandla umthengisi sika, wenkokhelo yakho 100% ku ukubheja yakho. Uma uhlomula ngesandla blackjack, okungukuthi uma uthola 21 amaphuzu kusukela amakhadi ezimbili zokuqala, the wenkokhelo 3 ukuze 2. Umshwalense eyimpesheni kwamabili kuya kwelilodwa uma umthengisi uthola isandla blackjack.
Ukuthenga Umshwalense: Umshuwalense kuphela olunikezwa nomthengisi bukhoma uma ikhadi wakhe evulekile kuyinto Ace. Uzodinga ukukhokha ingxenye yemali ukubheja yakho lemali njengoba imali maqondana umshwalense kule ifoni blackjack ibhonasi khulula game. Uma umthengisi engakutholi blackjack ke ngeke uthole lutho kodwa ukuqhutshwa umdlalo njengento evamile.
Lokhu ifoni blackjack ibhonasi khulula umdlalo kuzokwenza uzizwe VIP ne ikhono ukugembula usebenzisa ngezigxobo high. I bukhoma nomthengisi umoya inikeza okuhlangenwe nakho enengqondo ukuze ungaphuthelwa uya ekhasino umhlaba.